श्रीमानले शारी’रिक सम्बन्ध नरा’खेपछि आत्म’हत्या गरेकी डाक्टर प्रियाको सुसा’इड नोटले संसारलाई रूवायो – हेर्नुहोस्
भारत १ डिसेम्बर- मृ’त्यु रोज्नुअघि उनले फेसबुकमा सुसा’इड नोट लेखेकी थिईन् । उक्त सुसाइड नोटले भारत लगायत सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि चर्चामा अाएकाे हाे । नया दिल्ली, आफ्नो श्रीमान समलिङ्गी भएपछि अल इन्डिया मेडिकल इन्सिच्युट (एम्स) की डाक्टर प्रिया वेदीले सुसाइड नोट लेख्दै आत्म’हत्या गरेको घटनाले संसारभर चर्चा पायो।
हृदयविरक सुसा’इट नोट लेख्दै डाक्टरले आफ्नो प्राण त्यागेकी उनको पिडाले संसारलाइ रूवायो । विवाहपछि सजाएका सपना सबै भताभुङ भएपछि जीवन मरुभूमिमा परिणत भएको भन्दै आत्म*ह*त्या गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । मृ’त्यु रोज्नुअघि उनले फेसबुकमा सुसा*इड नोट लेखेकी थिईन् । उक्त सुसा*इड नोटले भारत लगायत सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि चर्चामा रहिरह्यो ।
विवाहको ६ महिनासम्म मैले आफूलाई सामान्य रुपमा सम्हाले, त्यसपछि मेरो मनमा आउन थाल्यो, ‘आजसम्म किन शारीरिक सम्बन्धका लागि मेरा श्रीमान् तयार भएनन् ?
म पछिल्लो पाँच वर्षदेखि डा. कमल वेदीसँग दाम्पत्य जीवन बिताइरहेकी छु । दाम्पत्य जीवनको महत्वपूर्ण अंश शा*रीरिक सम्बन्ध यो अवधिमा हामीबिच कहिल्यै भएन । विवाहको ६ महिनासम्म मैले आफूलाई सामान्य रुपमा सम्हाले, त्यसपछि मेरो मनमा आउन थाल्यो, ‘आजसम्म किन शारीरिक सम्बन्धका लागि मेरा श्रीमान् तयार भएनन् ?’
मेरो इमेल कसैले ह्याक गरिदिएको छ ।’ मनमा शंका राखेरै मैले उनको कुरामा विश्वास गरेँ । त्यसपछि भने उनले मसँग ८ देखि १० पटकसम्म यौ*नकर्ममा लिन हुने असफल प्रयास गरे ।
एकदिन मैले फेक इमेल आइडी भेट्टाएँ, जसको माध्यमबाट मेरा श्रीमान् समलिं*गीहरुसँग कुरा गर्थे, पो*र्न साइटहरु हेर्न गर्थे । यो इमेलमा रहेका सबै म्यासेज हामीले विवाह गर्नु पहिलेका थिए । जब मैले यसबारे श्रीमान्सँग कुरा राखेँ । उनले भने, ‘मेरो इमेल कसैले ह्याक गरिदिएको छ ।’ मनमा शंका राखेरै मैले उनको कुरामा विश्वास गरेँ । त्यसपछि भने उनले मसँग ८ देखि १० पटकसम्म यौ*नकर्ममा लिन हुने असफल प्रयास गरे । मैले यो कुरा कसैलाई बताउन सकिनँ, किनभने म उनीसँग प्रेम गर्थेँ । लाग्थ्यो, एकदिन सबै ठिक हुन्छ ।
परिस्थिति यतिमैँ सिमित रहेन । बरु उल्टै उनले मेरो परिवार र ममा खो*ट रहेको आ*रोप लगाउन सुरु गरे । मलाई मानसिक रुपमा प्रताडित गर्दै जान थाले । म चाहिँ उनकी श्रीमतीका रुपमा आफूलाई उभ्याएर हरेक कुरा सहन थालेँ । उनले सानातिना कुरामा पनि मलाई निकै दुःख दिए ।
करिब एकमहिना पहिले उनले भनेका थिए, म समलिंगी हुँ वा बाइसेक्सुअल हुँ । म विश्वस्त छु, उनी समलिंगी थिए किनकी मसँग रहँदा उनमा कहिल्यै उत्तेजना भएन । उनी आफ्नो पुरुष साथीसँग भने यौ*नको भरपुर आनन्द उठाउन सक्थे । काश्मिरमा रहेका उनका यौ*न पार्टनर फेक इमेल आइडीबाटै उनीसँग जोडिएका थिए ।
डा. बेदी मैले तिमीबाट केही चाहिनँ । केही चाहेकी भए पाँच वर्ष तिमीसँग हुन्नथेँ । यत्ति चाहेकी थिएँ, तिमीसँगै रहन । किन थाहा छ, म तिमीलाई हदभन्दा धेरै माया गर्थेँ । तिमी यस्तो कुरा कहिल्यै महशुस गर्न सक्दैनौ, किनकि तिमी त अप*राधी हौ । प्रियाले दिल्लीको एक होटलमा आराम गर्ने भन्दै पंखामा झु*ण्डिएर आत्म’हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।